Penny Auction Software | Inqola yokuthenga - RapidAuctionSoft
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 Isivivinyo samahhala sezinsuku
Plugin / Ukuthuthukiswa
Rock Isilinganiso okuqinile World Class Support
Siyakwamukela RapidAuctionSoft – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of Penny Auction Software and the Best PHP Penny Auction Script kuyatholakala
Buza mayelana yethu 10% Intengo umdlalo isiqinisekiso 1-603-557-1563
Singabantu manje bakwazi ukunikeza iconsi shipper nokuhlanganisa, sikunikeze turnkey ukuqedela umsebenzi!!!
Usuvele unayo i-website penny endalini?
Ingabe i-software yakho umdayisi ngikushiye engasekelwe?
Ingabe olususelwa ubuchwepheshe elidala?
Ingabe libe neziphazamiso?
Ingabe ama-imeyili zigcine ogaxekile?
Ingabe SEO yakho ayisebenzi? Akukhona yini ephathekayo friendly?
Asikwazi ukuhlanganisa umklamo wakho nokuqukethwe ku ohlelweni lwethu kakhulu aphakeme
Buyekeza okusha – Kufaka kangcono ekhoneni izithombe (ongakhetha kuzo 3 izitayela kanye 8 imibala, wonke umbhalo ashukumisayo manje ngolimi olusekelwe kanjalo), RSS, RSS + Atom feeds, Amamephu amasayithi for indali futhi e-CMS nezinye izinguquko eziningi!!!
Sibheke phambili ukuxoxa yakho Penny Auction Iwebhusayithi imibono nawe. Njalo iklayenti has imibono yabo siqu futhi siyakujabulela ngokubhala ngokwezifiso Auction Ikhodi, akukho lutho eziyinkimbinkimbi kithi. Thina bazijabulele zonke amaklayenti imibono yethu, Eqinisweni kuba ingxenye engcono kakhulu umsebenzi wethu…sithanda ukuba sihlanganyele injabulo yakho
Sishayele kunini, Sisebenza nezinkampani kwezilwandle sonke isikhathi
Ngakho niyithatha ngokungathí sina i e-commerce noma uPenny Auction Software ibhizinisi?
Usungenze ucwaningo lwakho futhi wezwa izindaba ezimbi mayelana nezinye izingosi e-commerce, futhi ukhathazekile mayelana ukuthenga emthonjeni elihle. Nokho sinalo emuva yakho. Nge ukuthuthukiswa khulula A isiqinisekiso esingcono kwezamabhizinisi futhi isikhathi eside sesivivinyo ukuthi wake sesibonile. Yizame 14 izinsuku nezingozi kwenye amaseva ethu…futhi uma usukulungele akusebenzise kwiseva yakho siqu, noma ukhethe elilodwa pof izixazululo zethu isingathwe
Okwesikhathi esithile okulinganiselwe esinakho isikhala 3 ukuhlolwa kumawebhusayithi beta….lezi 3 kumawebhusayithi akusebenzise futhi ukuhlolwa ngokuzibophezela sizofika isofthiwe mahhala ekuphileni…ngaphandle ngokwezifiso design noma izinhlelo. Thumela ama-imeyili ngokuphathelene beta ukuze ithimba lethu ukuthuthukiswa
Ingabe udinga Isixazululo Penny Auction Software, Penny Auction Script Solutions noma i-E-Commerce Isixazululo
Kuhle Penny Auction Software, Penny Auction Script Isixazululo Iyatholakala
Ngo 2018 siqhaphele ukuthi nabathengisi eziningana Penny Auction Software nesofthiwe E-commerce zazisebenzisa izindlela yisikhathi futhi kancane uma kungekho nezinhlaka yesimanje. Ngakho saqala ngokuhambela izindawo ngokubhala, sabhalela ikhodi yethu ekuqaleni kuze kuye esiphethweni usebenzisa CodeIgniter for PHP yethu. CodeIgniter kuyinto yesimanje MVC Framework (imodeli, umbono, isilawuli), ohlukanisa yokucabanga enengqondo ukuze avale ludingeka khona, kuba super lula ukufunda nokuthuthukisa i, ngokushesha ukwedlula PHP ejwayelekile, kunokwethenjelwa nokuningi ubufakazi esizayo.
Kodwa lokho kwakunganele, thina Waqaphela ukuthi isizathu sokuthi kungani abaningi amaseva PHP kuphela Penny Auction Software behluleka kungenxa yokuthi wethembele AJAX izikhathi, ukubhida kanye imiyalezo. wathutha Ngakho konke lokhu ukuze Socket.io futhi Node.JS. Okusho ukuthi iseva Ungathumela imibiko ngqo iklayenti sasingeke sibe khona isidingo iklayenti ngokuqhubekayo ucele idatha entsha. Isilinganiso sethu empeleni ukulandelela ukubhida e 1000th sika of a yesibili. Okusho ukuthi ukubhida yethu ngokushesha, ezinzile ithembeke ngaphezu kwezinye izixazululo. Ungakhathazeki ngokuthi umuntu okhalazayo mayelana elahlekile ibhidi yesibili wokugcina. ukubhida yethu zilandelwa ngokunembe kakhudlwana kunamanye amasayithi. Ungakwazi bambone ngokoqobo okusezingeni eliphezulu lomsebenzi ushintsho ngaphakathi yesibili efanayo uma abasebenzisi abaningi ukuvalelisa ngesikhathi esifanayo.
Umhlaba ekilasini Penny Auction Design
Ekugcineni sabona amaklayenti kakhulu engaba khona bekhululeke kakhudlwana ekhokhela ibamba futhi zigcinwe zisesimeni esihle izinkokhelo lula nyangazonke, ku Esinokwethenjelwa umthwalo ukulinganisela amaseva, olunikezwa omunye the best iseva izinkampani emhlabeni! Ngakho siyisebenzisa konke ngawe. Uma outgrow iseva ezivamile, ke lapho singazi khona futhi luyokushukumisela ukuba iseva lakho siqu uma kudingeka. Kodwa ngeke kusadingeka zonke izinzuzo software yethu version elawulwa.
Ukuze uthole elinganiselwe sonke isikhathi zonke amaklayenti entsha ukuthola ukufakwa khulula, 5 amahora ukuqeqeshwa 5 amahora design khulula.
Sinikeza okungaphezu nje Penny Auction Solutions
Buza kithi mayelana enqoleni yethu i-plugin.
Usekela kwalokho izilimi ezintsha
Rock izikhathi okuqinile, zilandelwa e thousandths of a yesibili. Okwenza kube inembe kunazo ukubhida uhlelo etholakalayo.
Zama ngaphambi kokuthenga. Mahhala 2 ngesonto isivivinyo.
Clones yamanje zihlanganisa
Ngaphezu kwalokho, sinezincwadi 25 Penny Auction Software izindikimba ukuthi singasetshenziswa yonke imikhiqizo yethu, okusho okukhulu bokwenza Idizayini Penny yakho endalini Software
Cela nathi mayelana nezinye izinhlobo endalini, senza okuningi okungaphezu nje Penny Auction Software
Hlola amademo yethu bukhoma On demo yethu site!!!
Penny Auction Izici Software
Ukubhalisa Ngokuvamile ngaphambi kokufaka ibhidi, umsebenzisi iyadingeka ukubhalisa.
Abasebenzisi Ngemvume kungaba asizakale izinzuzo eziningi zokuba ilungu – ungene ngemvume kukhasi le-akhawunti abo, beka ibhidi, engeza imali ku-akhawunti abo kanye nemisebenzi abaningi.
Thenga isikweletu se-/ Engeza ibhalansi Abasebenzisi ungakwazi ukuthenga isikweletu bese wengeza ibhalansi akhawunti yabo noma nge yokukhokha lomasango, yasebhange, noma idiphozi ngqo ngaphambi kokufaka ibhidi.
Indawo Amathenda Abasebenzisi bangakhetha umkhiqizo futhi beka ibhidi. Umsebenzisi ungafaka amabhidi amaningi njengoba befisa baze bawine. Bangaphinde noma beka ibhidi olulodwa noma ugcine ibhidi zabo bese usebenzisa Bidbutler ukuvalelisa ngokuzenzakalela egameni yabo.
Bidbutler Bidbutler, Abizwa nangokuthi ama-autobid noma inkosi ibhidi, yilapho uhlelo ubeka amabhidi akho agciniwe ngokuzenzakalelayo njalo ngemizuzwana eziyishumi, noma imiphi isikhawu owacacisayo.
Amathenda SMS Awudingi ukubhalisa futhi ungene ngemvume ukuze uthole ibhidi SMS. Ulwazi SMS ukubhida kungabonakala endalini ahlobene futhi kungenziwa isethwe umlawuli wesayithi.
Phila Abasebenzisi Ibhidi Umlando Ungabona siqu kanye neminye imisebenzi yabo ukubhida kusukela kusigaba ibhidi umlando ngaphakathi ikhasi imininingwane yomkhiqizo.
Winner Odle endalini ingumuntu wokugcina ukubeka ibhidi lapho isikhathi ifinyelela ayize. Owinile okhokhela intengo lokugcina lento endalini (okuzoba ngaphansi intengo langempela).
Izinhlobo Auction Kunezinhlobo eziningi endalini emakethe; Nokho, izinhlobo ezithandwa kakhulu Auction avamile, Intengo eme Auction, Nilbitter Auction, Auction Mahhala futhi Umafundana Auction.
-CMS Okuqukethwe ukuphathwa uhlelo (-CMS), lapho ungakha yokusesha injini Amakhasi ezahlukene wobungani endalini yakho indawo – ezifana Mayelana nathi, Xhumana nathi, Inqubomgomo yobumfihlo, Imigomo & Imibandela, Imibuzo Evame Ukubuzwa sika, Usizo, Indlela Esebenza nokunye.
Othi yamanje Auction ohlwini – Lapha ungakwazi ukubuka yamanje / Live Auction sika imininingwane yakho ukubhida.
Won Auction ohlwini – Kusuka lapha ungakwazi ukubuka uhlu lwakho indali iwine futhi ukhokhe intengo sokugcina.
Ibhidi Umlando Ingobo yomlando – Abasebenzisi bangabuka ibhidi wabo ingobo yomlando lapha.
Engeza Found (Thenga Ibhidi Pack) – Abasebenzisi bangafaka ibhalansi ukuze beka ibhidi kusuka kulesi sigaba.
Indlela yokukhokha – Abasebenzisi bangakhetha noma iyiphi indlela yokukhokha, zonke enokwethenjelwa kakhulu, futhi ukhokhe intengo endalini wokugcina. PayPal lalisemzileni yokukhokha ezenzakalelayo.
umlando wokwenziwe – Abasebenzisi bangabuka yonke imisebenzi yabo sokwenziwe kusuka kulesi sigaba.
Sebenzisa Ikhodi – Abasebenzisi ongahlenga ekhethekile sipho amakhodi ukuthi anikezwa yi-admin njengoba oluthile indawo ukukhuthazwa.
Bhekisa umngani – Abasebenzisi lingasho abangane amaningi njengoba befisa. Isizathu salokhu siwukuthi yonke yokudlulisela bangakwazi futhi ibhonasi credits esabekwa admin.
SHINTSHA iphasiwedi – Abasebenzisi ungashintsha iphasiwedi ye-akhawunti yabo lapha.
-Akhawunti Kuvaliwe – Abasebenzisi ngeke bakwazi ukuvala i-akhawunti yabo futhi ayikwazi ukuvula i-akhawunti yakhe kanye nekheli le-imeyili futhi.
newsletter Setting – Abasebenzisi bangasetha vumela noma vimbela newsletter okubhaliselwe inketho kusuka kulesi sigaba.
Bhalisa Newsletter Izivakashi kungaba ubhalisele newsletter endalini ukuthola izaziso, izibuyekezo izipesheli.
Isigaba nokuLawula admin ungaphatha (engeza, ukuhlela noma ukususa) imikhakha nokusesha ngoba izigaba noma ngegama noma i-ID.
Auctions Ukulawula ungakwazi ukwengeza, ukuhlela noma ukususa indali futhi ukucinga ngegama, isimo, uhlobo nobunikazi. I admin Ungaphinde ukopishe endalini efanayo kanye bheka ku ukubhida umlando ke futhi neminye imininingwane.
Auctions Umbiko / Delivery Admin ungabona umbiko we endalini ngokuwina noma imininingwane winner. I admin Ungashintsha isimo endalini sika okulindile ekuthunyelweni kusuka kulesi sigaba.
Iwebhusayithi Ukubeka I admin Ungasetha izilungiselelo indawo kulesi sigaba.
Ukuphathwa Ilungu I admin kungaba engeza, ukuhlela noma ukususa abasebenzisi noma ukucinga isimo sabo, igama nobunikazi. I admin ungabona futhi ukubhida abasebenzisi ' & lomlando womsebenzi.
-CMS I admin ungakwazi ukwengeza, ukuhlela noma ukususa noma yikuphi okuqukethwe indawo ezifana Usizo, Imibuzo Evame Ukubuzwa, Inqubomgomo yemfihlo nokunye.
Imeyili Ukubeka I admin ungakhetha kulungiselelwa i-imeyli kusuka kule ngxenye – kusebenze imeyili, ukhohlwe iphasiwedi njll.
Winner nokuLawula admin Ungasetha uhlu winner nge isithombe sabo, ikheli, futhi izimpendulo zabo.
Imigomo Izibalo I admin angabuka umbiko website futhi ukuthumela umbiko ngefomethi ye-CSV.
Isikhathi sendawo Ukubeka I admin kungaba setha umkhawulo wesikhathi kulungiselelwa izwe lakhe kulesi sigaba.
Special Ukunikeza / Promotion Management
Isikhathi I admin Ungasetha Izipesheli amabhonasi ukuthuthukisa iwebhusayithi yabo. Amakhodi ebhonasi kuyodingeka umkhawulo setha isikhathi.
Ibhonasi Ukubeka I admin Ungasetha lokubhalisa kanye nokubalulwa kwe amabhonasi.
Ibhidi Pack nokuLawula admin Ungasetha ezahlukene ibhidi amaphakethe kanye credit khulula. I admin ungakwazi ukwengeza, ukuhlela noma ukususa ngamunye Ibhidi Pack.
Usizo /-FAQ Ukuphathwa Dala yosizo-FAQ Amakhasi kanye nencazelo.
IP Block I admin angamuvimba iyiphi IP okwengeziwe iwebhusayithi ukufinyelela.
Shintsha iphasiwedi I admin Ungashintsha iphasiwedi ye-akhawunti yabo lapha.
Misa okwesikhashana Auctions
Auto relist futhi uhlu auto indali
Ngena ngemvume nge-Facebook noma ku-Twitter
addons eziningi / ama-plugin kanye nezici optiona
Nakuba yabhalwa ngo-nezinhlaka yesimanje okusho uzinzile futhi esivikelekile
Ucingo lakho (edingekayo)
New DROPSHIP Addon has usekelo Doba futhi MegaGoods, dropshippers ngaphezulu ukuba wanezela phezu ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Vuka ugijime ne esitolo ku ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa ezilula
Kwethulwa theming wethu 20+ izifanekiso, sub combos ithempulethi…cishe 30 izindikimba kanye ezikhulayo…manje ungakha phezu 500+ imiklamo eziyingqayizivele ngokuphelele. abaningi esekelwe phezu ngamaholide
Ukusekela Ulimi Dynamic, ake kusayithi lakho ufice abantu abaningi
New Addon ngoba Penny Auctions, Shopping nesikhungo POS ikhodi…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (pos, ukuyothenga noma indali…eBay indali uyeza emva kokuphela konyaka BTW). Lokhu Addon kusebenza ngemikhiqizo kanye meta tags njengamanje, kodwa idinga i-akhawunti ye-google lokuhumusha-API yabo. […]